को सच्चा छिमेकीः बाँध बनाएर डुबाउने भारत, काठमाडौं आएरै राहत दिने चीन ? – shubhabihani
Home / रास्ट्रिय खबर / को सच्चा छिमेकीः बाँध बनाएर डुबाउने भारत, काठमाडौं आएरै राहत दिने चीन ?
को सच्चा छिमेकीः बाँध बनाएर डुबाउने भारत, काठमाडौं आएरै राहत दिने चीन ?
Posted by: admin in रास्ट्रिय खबर August 15, 2017	Comments 40 Views
काठमाडौं, ३१ साउन । नेपाल अहिले बाढी, पहिरो र डुबानले आक्रान्त छ । झण्डै सय जनाको मृत्यु भइसकेको छ । हजारौं विस्थापित छन् । उद्धार र राहतमा राज्यदेखि, कलाकार, राजनीतिक दल, सर्वसाधारणसम्म लागिपरेका छन् । यस्तो बेला उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालको दुःखमा साथ दिँदै १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा गरेको छ । बाढीसँग कुनै सरोकार नभएपनि चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले काठमाडौं आएर उक्त सहयोग चीनले दिने घोषणा गरे ।
यता तराईमा बाढीको कारण भारत हो भन्ने कुरा सबैलाई सर्वविदितै छ । भारतले आफूलाई फाइदा हुनेगरी नेपालसँगका सीमानामा बनाएको बाँधकै कारण नेपालको तराई क्षेत्रमा डुबानमा पर्नुको साथै बाढीले प्रभावित हुँदै आएको छ । कोशी, लक्ष्मणपुर लगायत बाँधले नेपालको तराई डुबानमा पर्दै आएको छ । यस वर्षपनि यिनै बाँधका कारण नेपालको तराई डुब्यो । मुख्यतयाः कोशी ब्यारेजका ढोका नखोल्दा तराई डुबेको कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ ।
अहिले कोशीलगायत सीमा क्षेत्रका अन्य बाँधको साँचो भारतकै हातमा छ । सम्झौताका नाममा गर्मीयाममा सिंचाईको लागि पानी आफ्नो भुभागमा लैजाने र बर्खायाममा पानीको वहाव बढ्दा सबै नेपालतिर पठाइदिने काम पनि दक्षिण छिमेकी भारतबाट हुँदै आएको छ । अहिले बाढीले प्रभावित तराई पनि भारतले त्यही व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ ।
भन्न त भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध रोटीबेटीसँग तुलना गर्छ । तर, व्यवहार भने सधै हस्तक्षेपकारी हुन्छ । र, अहिले पनि देखियो । तराई डुबान पर्दासमेत कोशी ब्यारेज खोल्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि मानेन् । आज भारतीय पक्षकै कारण तराईमा जनधनको ठूलो क्षति भयो । हजारौं मानिस घरबार विहिन भए । तर, अहिलेसम्म भारतले एक पैसा पनि राहत दिएको छैन् ।
अब यहाँ समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि नेपाल भारत सम्बन्ध ईश्वरले बनाएको भन्ने भारतीय राजदूत, विशिष्ट सम्बन्ध रहेको र कसैले तोड्न नसक्ने भन्ने नेताहरुले । दक्षिण भारत सच्च छिमेकी हो उत्तर चीन ? अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि यही बहस सुरु भएको कि भारत र चीनमध्ये कुन सच्चा छिमेकी हो ?
वीर गोर्खाली नामबाट फेसबुकमा लेखिएको छ– ‘भारतको बाँधहरुको कारण नेपालमा बाढीले प्रलय मच्चाएपनि भारतबाट एक सुको पैसाको सहयोगको घोषणा भएन, तर कुनै बाढीको कारक नभैकन पनि चीनबाट १० लाख अमेरिकी डलरको सहयोग घोषणा भैसक्यो । अब भन्नुस नेपाल र नेपाली को सच्चा मित्र चीन र चिनियाहरु हो कि होइनन ? भारत त जहिले पनि दुश्मन भै राखेको छ ।’
सरिफ लेख्छन्– जति नै चीनले नेपालको दुःखमा साथ दिने कोसिस गरेपनि, नेपाली नेताले कहिले चीनको साथलाई बुझ्न सकेन । जसो गरेपनि भारत नै अच्छा भनेछन भारतसंग नै लम्पसार परेछन् । भारतको आँची खाने नेता नै परे ।’
यसरी नेपालीहरुको अन्तर आत्माले चीनलाई सच्चा छिमेकी मानेपनि राजनीति नेतृत्व अझै भारतकै पक्षमा छन् र भारतलाई नै सच्च छिमेकी मानिरहेका छन् । त्यसकारण अब जनताका प्रतिनिधी नेताले यो विषयमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यो नै आजको आवश्यकता हो ।
Previous: मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने समय ३ दिन थपियो
Next: यी हुन् भारतले एकतर्फी बनाएका १५ बाँध